၂၅ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
People displaced by fighting in north-western Myanmar between junta forces and anti-junta fighters walk in Chin State, Myanmar, May 31, 2021. Picture taken May 31, 2021. REUTERS/Stringer
ဦးအောင်ခင်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး သုံးသပ်ချက်
ချင်းပြည်နယ်က ထန်တလန်၊ မင်းတပ်၊ ဟားခါး၊ မတူပီနဲ့ အခြားမြို့ နယ်တွေဟာ စစ်ကောင်စီတပ်ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှာ လူသိများပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ကို ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်က ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲလိုက်မုဆိုးကိုင် တူးမီးသေနတ်နဲ့ စတင်လိုက်တဲ့ အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဟာ ချင်းပြည်နယ်မှာ ပြန့်နှံပနေပါပြီ။ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ နယ်အထိ တိုးချဲ့ ထားပါတယ်။ အကျအဆုံးများတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် အပျက်အစီးများလာပြီး ထွက်ပြေးရတဲ့ အရပ်သားဦးရေ တိုးပွားနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင် စစ်ဆင်ရေးအားလုံး ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့က တိုက်တွန်းရတဲ့အထိ အခြေအနေ ဆိုးဝါးလာပါတယ်။ မြို့ နယ် (၉) မြို့ နယ်မှာ ဟားခါးကလွဲပြီး မြို့ နယ်အားလုံးမှာ အင်တာနက် ဖြတ်ထားပါတယ်။ မြို့ တွင်းတိုက်ပွဲ ပြင်းထန်တဲ့ ထန်တလန်မှာဆိုရင် မြို့ သူမြို့ သားအများအပြား ထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက် လူပေါင်း (၃၀) လောက်သာ ကျန်တော့ကြောင်း သိရပါတယ်။ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကို ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံက မွေးထုတ်ခဲ့သလို နွေဦးတော်လှန်ရေးက CDF ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကို မွေးဖွားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဆလ ဆိုရှယ်လစ်စစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှာ ချင်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်၊ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကို ၁၉၈၈ မတ်လမှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်မယ့် ၁၉၉၂ မယ်နာပလော သဘောတူချက်ကို NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေနဲ့အတူ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အင်အား (၅၀၀) ဝန်းကျင်ရှိပြီး ၂၀၁၂ မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာမှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်သဘောတူညီချက် NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဟာ ချင်းတိုင်းရင်းသားအရေး ဆောင်ရွက်နေပေမယ့် ဖယ်ဒရယ်အရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ လက်တွဲလှုပ်ရှားပြီး တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ (၆၅) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ၂၀၁၃ မှာ ကြေညာထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းပြီး မကြာမီ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရနဲ့ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး မဟာမိတ် ဖွဲ့လိုက်ကြောင်း မေလမှာ ကြေညာပါတယ်။ CNF ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်ဆာခေါင်,ဟာ NUG အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဖယ်ဒရယ်ရေးရာဝန်ကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်အားနည်းပေမယ့် CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့  စစ်သင်တန်းတက်တဲ့လူငယ်တွေ ထောင်သောင်းချီ ရှိနေပါပြီ။ ချင်းလူငယ်တွေတင်မကဘဲ စစ်ကိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းက ဗမာလူငယ်တွေလည်း CNF ရဲ့  စစ်သင်တန်းကို တက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် CDF ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသူတွေထဲက CNF ရဲ့  စစ်သင်တန်းတက်ခဲ့သူ အများအပြား ပါဝင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ CDF ချင်း ကာကွယ်ရေးတပ်ကို ချင်းအဖွဲ့ ငါးဖွဲ့က စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် (၁၆) ဖွဲ့အထိ ရှိနေပါပြီ။
အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်တာမို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်က ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့က ကြေညာကြောင်းကိုလည်း DVB သတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီး ဖယ်ဒရယ်စနစ် တည်ထောငင်မယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ရရာလက်နက်နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ချင်းကာကွယ်ရေးမှာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါ ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှု၊ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့  ကူညီရိုင်းပင်းမှု၊ စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်မှုစတဲ့ အာသာချက်တွေကြောင့် တူးမီးသေနတ်ကိုင် ချင်းလူငယ်တွေ အောင်မြင်စွာ တိုက်ပွဲဆင်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ထုတ် Myanmar Now မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (၁၆) ဖွဲ့ ပူးတွဲပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။
ထန်တလန်မြို့ ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်ကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချကြောင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA ရခိုင်တပ်တော်၊ တအာင်းပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်း နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရေရှည်တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲဖို့အတွက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ကောင်းကောင်းရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အရင်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပေမယ့် အခုတော့ ထိုင်းဈေးကွက် မရှိတော့ဘူးလို့ စာရေးဆရာ Bertil Lintner က ဆိုပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆီက လက်နက်ခဲယမ်း အကူအညီရမလား ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဝတပ်ဖွဲ့မှာ တရုတ်လက်နက်မျိုးစုံ ရှိနေပေမယ့် စစ်ကောင်စီ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ဝတပ်ဟာ စိတ်မဝင်စားဘဲ ခပ်ရှောင်ရှောင် လုပ်နေပုံရတယ်လို့ Bertil Lintner က ဆိုပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့  ကူညီရိုင်းပင်းမှုနဲ့ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေ အောင်ပွဲခံနေပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်နဲ့ မဏီပူမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဒေသခံချင်းတွေ များပြားလာပါတယ်။ ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်း လူမှုရေးအကူအညီ ပေးကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဗမာစစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ပါဝင်လာမလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေကြောင်း Bertil Lintner က ဧရာဝတီစာစောင်မှာ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးအောငျခငျရဲ့ မွနျမာ့အရေး သုံးသပျခကျြ
ခငျြးပွညျနယျက ထနျတလနျ၊ မငျးတပျ၊ ဟားခါး၊ မတူပီနဲ့ အခွားမွို့နယျတှဟော စဈကောငျစီတပျကို ခုခံတိုကျခိုကျရာမှာ လူသိမြားပါတယျ။ စဈကောငျစီတပျကို ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးနဲ့ ခငျြးကာကှယျရေးတပျက ခုခံတိုကျခိုကျနတော ဖွဈပါတယျ။ အမဲလိုကျမုဆိုးကိုငျ တူးမီးသနေတျနဲ့ စတငျလိုကျတဲ့ အာဏာရှငျတျောလှနျရေးဟာ ခငျြးပွညျနယျမှာ ပွနျ့နှံပနပေါပွီ။ ခငျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှဖှေဲ့ပွီး၊ စဈကိုငျးတိုငျး ကလေးမွို့နယျအထိ တိုးခြဲ့ထားပါတယျ။ အကအြဆုံးမြားတဲ့ စဈကောငျစီတပျဟာ လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈခတျတဲ့အတှကျ အပကျြအစီးမြားလာပွီး ထှကျပွေးရတဲ့ အရပျသားဦးရေ တိုးပှားနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခငျြးပွညျနယျအပါအဝငျ စဈဆငျရေးအားလုံး ရပျဆိုငျးဖို့ ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီက နိုဝငျဘာလ (၁၀) ရကျနကေ့ တိုကျတှနျးရတဲ့အထိ အခွအေနေ ဆိုးဝါးလာပါတယျ။ မွို့နယျ (၉) မွို့နယျမှာ ဟားခါးကလှဲပွီး မွို့နယျအားလုံးမှာ အငျတာနကျ ဖွတျထားပါတယျ။ မွို့တှငျးတိုကျပှဲ ပွငျးထနျတဲ့ ထနျတလနျမှာဆိုရငျ မွို့သူမွို့သားအမြားအပွား ထှကျပွေးကွတဲ့အတှကျ လူပေါငျး (၃၀) လောကျသာ ကနျြတော့ကွောငျး သိရပါတယျ။ CNF ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးကို ရှဈလေးလုံး အရေးတျောပုံက မှေးထုတျခဲ့သလို နှဦေးတျောလှနျရေးက CDF ခငျြးကာကှယျရေးတပျကို မှေးဖှားလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
မဆလ ဆိုရှယျလဈစဈအာဏာရှငျခတျေမှာ ခငျြးနိုငျငံရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့၊ CNF ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးကို ၁၉၈၈ မတျလမှာ တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ဖယျဒရယျနိုငျငံ တညျထောငျမယျ့ ၁၉၉၂ မယျနာပလော သဘောတူခကျြကို NLD လှတျမွောကျနယျမွနေဲ့အတူ လကျခံခဲ့ပါတယျ။ အငျအား (၅၀၀) ဝနျးကငျြရှိပွီး ၂၀၁၂ မှာ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရနဲ့ အပဈရပျဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၅ အောကျတိုဘာမှာ နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ အပဈရပျသဘောတူညီခကျြ NCA ကို လကျမှတျရေးထိုးပါတယျ။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးဟာ ခငျြးတိုငျးရငျးသားအရေး ဆောငျရှကျနပေမေယျ့ ဖယျဒရယျအရေး၊ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ ရရှိရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီအရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံနဲ့ လကျတှဲလှုပျရှားပွီး တိုကျပှဲဝငျမယျလို့ (၆၅) နှဈမွောကျ ခငျြးအမြိုးသားနေ့ ၂၀၁၃ မှာ ကွညောထားပါတယျ။
စဈကောငျစီ အာဏာသိမျးပွီး မကွာမီ ဖှဲ့စညျးလိုကျတဲ့ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရနဲ့ CNF ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး မဟာမိတျ ဖှဲ့လိုကျကွောငျး မလေမှာ ကွညောပါတယျ။ CNF ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာဆလိုငျးလနျြမှုနျဆာခေါငျ,ဟာ NUG အစိုးရအဖှဲ့မှာ ဖယျဒရယျရေးရာဝနျကွီး ဖွဈလာပါတယျ။ အငျအားနညျးပမေယျ့ CNF ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးရဲ့ စဈသငျတနျးတကျတဲ့လူငယျတှေ ထောငျသောငျးခြီ ရှိနပေါပွီ။ ခငျြးလူငယျတှတေငျမကဘဲ စဈကိုငျးနဲ့ မကှေးတိုငျးက ဗမာလူငယျတှလေညျး CNF ရဲ့ စဈသငျတနျးကို တကျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ CDF ခငျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှမှော ပါဝငျတိုကျခိုကျနသေူတှထေဲက CNF ရဲ့ စဈသငျတနျးတကျခဲ့သူ အမြားအပွား ပါဝငျဖှယျ ရှိပါတယျ။ CDF ခငျြး ကာကှယျရေးတပျကို ခငျြးအဖှဲ့ ငါးဖှဲ့က စုပေါငျးဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ (၁၆) ဖှဲ့အထိ ရှိနပေါပွီ။
အကွမျးဖကျစဈအာဏာသိမျးတာကို ဆနျ့ကငျြတာမို့ စဈအာဏာရှငျစနဈ ခြုပျငွိမျသှားတဲ့အထိ တိုကျပှဲဝငျသှားမယျလို့ ခငျြးကာကှယျရေးတပျက ဧပွီလ (၂၄) ရကျနကေ့ ကွညောကွောငျးကိုလညျး DVB သတငျးမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရနဲ့ လကျတှဲပွီး ဖယျဒရယျစနဈ တညျထောငငျမယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ရရာလကျနကျနဲ့ စဈကောငျစီတပျကို ခုခံတိုကျခိုကျဖို့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ခငျြးကာကှယျရေးမှာ နိုငျငံရေးရညျရှယျခကျြပါ ရှိလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ နယျမွကြှေမျးကငျြမှု၊ ဒသေခံပွညျသူတှရေဲ့ ကူညီရိုငျးပငျးမှု၊ စိတျဓါတျပွငျးထနျမှုစတဲ့ အာသာခကျြတှကွေောငျ့ တူးမီးသနေတျကိုငျ ခငျြးလူငယျတှေ အောငျမွငျစှာ တိုကျပှဲဆငျနိုငျတာဖွဈကွောငျး စကျတငျဘာလ (၁) ရကျနထေု့တျ Myanmar Now မှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ခငျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ (၁၆) ဖှဲ့ ပူးတှဲပွီး တိုကျခိုကျဖို့လညျး စီစဉျထားပါတယျ။
ထနျတလနျမွို့ကို ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့ စဈကောငျစီရဲ့လုပျရပျကို အပွငျးအထနျ ရှုတျခကြွောငျး မွောကျပိုငျးမဟာမိတျသုံးဖှဲ့ဖွဈတဲ့ AA ရခိုငျတပျတျော၊ တအာငျးပလောငျလှတျမွောကျရေးတပျနဲ့ MNDAA ကိုးကနျ့တပျဖှဲ့တို့ကလညျး နိုဝငျဘာလ (၁) ရကျနကေ့ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျပါတယျ။ ရရှေညျတိုကျပှဲ ဆငျနှဲဖို့အတှကျ စဈလကျနကျပစ်စညျး ကောငျးကောငျးရှိဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အရငျက ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဝယျယူနိုငျပမေယျ့ အခုတော့ ထိုငျးဈေးကှကျ မရှိတော့ဘူးလို့ စာရေးဆရာ Bertil Lintner က ဆိုပါတယျ။ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျတှဆေီက လကျနကျခဲယမျး အကူအညီရမလား ဆိုတာကလညျး စဉျးစားစရာ ဖွဈနပေါတယျ။
ဝတပျဖှဲ့မှာ တရုတျလကျနကျမြိုးစုံ ရှိနပေမေယျ့ စဈကောငျစီ ဆနျ့ကငျြလှုပျရှားမှုမှာ ဝတပျဟာ စိတျမဝငျစားဘဲ ခပျရှောငျရှောငျ လုပျနပေုံရတယျလို့ Bertil Lintner က ဆိုပါတယျ။ ဒသေခံပွညျသူတှရေဲ့ ကူညီရိုငျးပငျးမှုနဲ့ ခငျြးကာကှယျရေးတပျတှေ အောငျပှဲခံနပေမေယျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ မီဇိုရမျနဲ့ မဏီပူမှာ ခိုလှုံနတေဲ့ ဒသေခံခငျြးတှေ မြားပွားလာပါတယျ။ ခငျြးလူမြိုးအခငျြးခငျြး လူမှုရေးအကူအညီ ပေးကွမှာ ဖွဈပမေယျ့၊ ဗမာစဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေးမှာ ပါဝငျလာမလားဆိုတာကတော့ စဉျးစားစရာ ဖွဈနကွေောငျး Bertil Lintner က ဧရာဝတီစာစောငျမှာ သုံးသပျထားပါတယျ။
နိုင်ငံတကာဖိအား ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ
ဧည့်သည်တော်များ နဲ့ မြန်မာ့အကျိုးစီးပွား